By ourtourism news On : December 3, 2018
जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तैयार छन् जोकोहीलाई । गर्मीमा पग्लन, जाडोमा जम्न तैयार छन् । तैयार छन् बर्खे झरीमा रुझ्न, चिसो हुरीसंग जुध्न ।
काधकाधमा-ढाडढाडमा बोकेर कहाँ पुग्नु ? टाउकोमा टेकाएर समेत उठाउछन् अरुलाई । अनि बनाइदिन्छन् रातारात विश्वब्यापी र महान । गाउँछन् उनीहरूसंगसंगै उमंगको गीत । आफन्त र प्रिय मात्र बनाउदैनन् पराईलाई । गुनमाथि गुनैको पगरी गुथाइदिन्छन् । जुनीजुनीभरलाई पुग्नेगरि ।
दुनियाँको रहरमा बिना कन्जुस्याइँ निस्वार्थ सेवा गर्ने क्रममा आफैलाई रित्याएर काट्छन् असंख्य कहर । कुनै माग र गुनासो नगरिकनै । किनकि ‘कठिनाइले जीवन ध्वस्त बनाउदैन बरू सम्भावना र शक्तिलाई उजागर गरिदिन्छ’को जीवनोपयोगी सन्देश दिनु छ सबैलाई । जनहितको निम्ति साच्चिकै सक्कली समर्पण र त्यागको पाठ पाउछु हाम्रा हिमालबाट मैले ।
हाम्रो जस्तो एकबारको जुनी होइन हिमालको । कति करोड बर्षदेखि यी हिमालहरू यसैगरी बाचेका होलान् ! जति अग्लिए पनि जमीन छाडेका छैनन् । होचालाई रत्तिभर होच्याएका छैनन् अग्लाले । न त होचाले अग्लाका आलोचना र गुनासा नै गरेका छन् । मिलेर बस्दै आएकाछन् आत्मीय मीत जसरी । स्वार्थ र सङ्कीर्णताको दायराभन्दा माथि उठेका हाम्रा हिमाल आफैमा महान छन् । स्वस्थ सम्बन्धको प्रतीक भएर उभिएका छन् संसार सामु यिनीहरू । यसरी घनिष्ठ र पवित्र मित्रताको आदर्श बनेर बसेको देख्दा गर्वले गदगद हुन्छ मन ।
पूर्णरुपले खुलेर हास्दै सम्झाइरहेछ सधै- हजार दुःखलाई निलेर भित्रभित्रै, हास्नुपर्छ बाहिर सधैसधै । किनकि हासो नै समस्या समाधानको साधन हो । र माध्यम हो- सुखमय जीवनको उर्जा । संसार बदल्न आफै हास्नु पर्छ पहिला । संसारले हाम्रो रुवाइलाई हासोमा बदल्दैन । हासो र खुसी बाडेर कहिल्यै कम हुदैन भन्ने नि:शुल्क दर्शन प्रवाह गरिरहेछन् हामीलाई ।
हाम्रा हिमाल अनेक अनुकरणीय बिम्बहरूले सिंगारिएको छन् । के छैन हाम्रा हिमालसंग सिक्न सकिने जीवनोपयोगी सन्देश र उत्प्रेरणाका उर्जाहरू ? धैर्यता नै सफलताको साचो अनि सर्बाधिक बलियो हतियार हो भन्ने पाठ पढाइरहेछन् । जतिसुकै ठूल्ठूला संकटमा पनि अटल भएर बसेकाछन् ।
डरमर्दो र भयावह स्थितिमा पनि धर्मराउदैनन् । शान्ति र सौम्यता नगुमाएर बसेका छन् हाम्रा हिमाल । हाम्रा हिमाल आधुनिकताको आडम्बरमा तडकभडक होइन । सरलतामा जीवनको मूलभूत सार देख्छन् । मानौं हिमाल जीवनशैलीको स्रोत हो ।
कसैको अगाडि शिर नझुकाउने स्वाभिमानी, अकारण साथ दिइरहने आत्मीय, सधै हितको पक्षमा उभिने हितैषी … .. . जस्ता अनेक बिशेषताका बिम्बजति उत्तिकै उत्प्रेरक, अनुकरणीय र स्तुत्य छन् हाम्रा हिमालका ।
क्षणभर खाली नरहने, यता र उता दौडिरहने यो मनलाई एकैछिन हिमालमा अड्याउदा पनि कति धेरै प्रेरणादायी पाठ पाइदोरहेछ । जसलाई हजार शब्दले पनि बताउन सक्दैन । शब्दमा अभिव्यक्त हुनु भनेको बजिरहेको सुमधुर धुनलाई रोकेर मुखले बताउनु जस्तै रहेछ ।
कति जाती हुने थियोे । हिमालजस्तै मानिसहरू हिमालकै रंगले रंगिए, हिमालकै सुवासले सुवासित भए र हिमालकै पहिचानले परिचित भए ! कति सुन्दर हुने थियोे हाम्रो जीवन ! कति स्वर्गीय हुने थियोे यो धरती !
Previous Post Previous post: सिद्धबाबाको महिमा जति छ त्यति नै खतरा छ ?
Next Post Next post: पर्यटनको पर्खाइमा बराह ताल